April 2020 - ALANZAYAR
မသခေငျနောကျဆုံးအခြိနျလေးမှာ သူတို့သားအဖကိုပွဈသှားတဲ့ အမဖွေဈသူနဲ့ ( ၁ ) ကွိမျလောကျတှပေ့ါရစေ..
26/04/2020 admin 0
မသေခင်နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာ သူတို့သားအဖကိုပြစ်သွားတဲ့ အမေဖြစ်သူနဲ့ ( ၁ ) ကြိမ်လောက်တွေ့ပါရစေလို့ ဖခင်ကို တောင်းဆိုနေတဲ့ ကလေးငယ် လင်မယားကွာရှင်းတဲ့ကိစ္စဟာတစ်ကယ်တမ်း မလွယ်ကူပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆို အဲ့ဒီဒဏ်ကို အဓိကခံစားကြရသူတွေကတော့ ကလေးငယ်တွေဖြစ်လို့ပါ။အဲ့ဒီဒဏ်တွေကြောင့် ကလေးငယ်တွေရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပျက်ဆီး ယိုယွင်းလာတတ်ကြပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံက […]
သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ထဲမှာ ထားရှိသော လူ တစ်ဦးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိ
သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ထဲမှာ ထားရှိသော လူ တစ်ဦးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိ “သီတဂူ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်-စစ်ကိုင်းတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး Positive တစ်ဦးတွေ့ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်” အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့သော သံဃာ၊ သီလရှင်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို သီတဂူ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နှင့် သီတဂူဝိပဿနာ အကယ်ဒမီတို့တွင် community based facility quarantine […]
မြောက်ကိုရီးယားမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးဆက်ပျံ့နှံ့နေပြီဆိုတာ ဒီနေ့ပဲ သိလိုက်ကြရပြီ.
မြောက်ကိုရီးယားမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်​ရောက်နေပြီ​မြောက်ကိုရီးယားမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်​ရောက်နေပြီဆိုတာဒီနေ့ပဲသိလိုက်ကြရပြီ မြောက်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေကအခုအချိန်အထိနိုင်ငံအတွင်းမှာCovid-19ုဖစ်ပွားမှုတစ်ခုမှမရှိဘူးလို​ပြောခဲ့တာအလိမ်အညာတစ်ခုသာဧပြီလ ၂၀ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်..။ ​မြောက်ကိုရီးယားက တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့သူတစ်ယောက်က မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနေTumen မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတရုတ်ပြည်ကိုဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းပေါ့။တရုတ်နယ်စပ်အစောင့်တွေက​သေနတ်နဲ့ပစ်ဖမ်းတာခံလိုက်ရတယ်..။ ​သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့တရုတ်ပြည်က Longjingက ဆေးရုံ(Longjing, Jilin Province)ကိုရောက်တယ်​ဆေးရုံရောက်တော့ဆရာဝန်တွေက​သွေးစစ်တယ်။အဲဒီမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ​တွေ့ရတယ်ဆိုပြီး Daily NK ကို သတင်းပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်..။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကို ပြန်ဝင်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုစစ်တယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို​သေသေချာချာပိုးသတ်တယ်၊နယ်စပ်ကိုပိတ်တယ်ပင်လယ်ဘက်နဲ့​လေကြောင်းလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့တယ်..။ ဒီလိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့သိပ္ပံနည်းကျအစီအမံများပြုလုပ်ခဲ့လို့ဒီနေ့အထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရတဲ့သူတစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူးကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးPak Myong Su Pakကကမ္ဘာ့သတင်းထောက်တွေကို ဧပြီလထဲမှာပြောခဲ့တ​မြောက်ကိုရီးယားမှာဇန်နဝါရီက​ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းCOVID […]
မြန်မာနဲ့ အာဆီယံ ၄ နိုင်ငံကို ကိုဗစ်အန္တရာယ်မြင့်မားလာမယ့်နိုင်ငံတွေအဖြစ် ထိုင်း သတ်မှတ်
မြန်မာနဲ့ အာဆီယံ ၄ နိုင်ငံကို ကိုဗစ်အန္တရာယ်မြင့်မားလာမယ့်နိုင်ငံတွေအဖြစ် ထိုင်း သတ်မှတ် မြန်မာ၊ မလေးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကို ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ အန္တရာယ် မြင့်မားတဲ့ နိုင်ငံတွေစာရင်းထဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံက ထပ်တိုး ထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ၅ နိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ […]
ကိုရိုနာရောဂါပိုး ဒေးဗစ်လားအဆက် ရန်ကုန်မှ ၃ ဦး မူဆယ်မှ ၁ ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ (၂၄-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံ
ကိုရိုနာရောဂါပိုး ဒေးဗစ်လားအဆက် ရန်ကုန်မှ ၃ ဦး မူဆယ်မှ ၁ ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ (၂၄-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၄-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ၁။ (၂၄-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) […]
မိန်းမခိုးမည့်ညမှာ ဆက်ဖီဆွဲတတ်လွန်းတဲ့ ညီမသိသွားလို့ နွားဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့အဖြစ်..
မိန်းမခိုးမည့်ညမှာ ဆက်ဖီဆွဲတတ်လွန်းတဲ့ ညီမသိသွားလို့ နွားဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့အဖြစ် “ကိုရီး ကုပ်​​ချောင်း​ချောင်းနဲ့ ဘာလုပ်​​နေတာလဲ” “ငင်​ … ” လှည့်​ကြည့်​လိုက်​​တော့ ကျုပ်​ညီမ​ဗျ အိပ်​ချင်​မူးတူးနဲ့ သူ့အခန်းထဲကထွက်လာတယ်​…” နင်​ခုထိ မအိပ်​​သေးဘူးလား ”“အိပ်​မက်​ထဲမှာ ကိုရီး မိန်းမသွားခိုး မယ်​လို့ မက်​လို့ လန့်​နိုးလာတာ ”” ငါ့နှယ်​ အဲဒါမက်​တာနဲ့ […]
Quarantine ဝငျနတေဲ့ မွနျမာအမြိူးသမီးတဈဦး သားယောကျကြားလေး အောငျမွငျစှာမှေးဖှား
24.4.2020 နံနက်(9:30)ခန့်က ပြည်တော်ပြန်များအား (၂၁)ရက် Quarantine ပြုလုပ် စောင့်ကြည့်အဖြစ်ထားရှိသည့် မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ် သံလွင်ဆောင်-၂ မှ မုဒုံမြို့နယ် နှီးပဒေါရွာမှ (၂၇)နှစ် အရွယ် ကိုယ်ဝန်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရုတ်တရတ် ကလေးမွေးချင် လာ၍ ဗိုက်နာလာသဖြင့် မော်လမြိုင် RESCUE လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ကလေးဆေးရုံ(အမေရိကန်ဆေးရုံ)Hospital Quarantine အဆောင်သို့ […]
လုံခွုံ​ရေး လှညျ့ကငျး လှညျ့လညျ​နေ​သောယာဉျ နှငျ့ ဆိုငျကယျးမြားကိုတိုကျပွီးထှကျ​ပွေး
၂၁ . ၄ . ၂၀၂၀ကား စွန့်ပစ်ထွက်​ပြေး။ လုံခြုံ​ရေး လှည့်ကင်း လှည်လည်​နေ​သောယာဉ် နှင့် အမှတ် ၃ ရပ်ကွက်တွင်းရှိ ဆိုင်ကယ် ခြံစည်းရိုးများကို တိုက်ပြီးထွက်​ပြေးသွား​သော ကား မြဝတီမြို့နယ် မင်းလက်ပံရွာအဝင် သချိုင်း အင်​တောမှာ စွန့်ပစ် ထားခဲ့ ကား ပိုင်ရှင်ကိုလုံခြုံ​ရေးတပ်ဖွဲ့များမှ​တောနင်းရှာ​ဖွေ။ […]
အရှက်ကွဲချင်ကွဲပါစေ တစ်နိုင်ငံလုံးသိအောင် ပြောမှဖြစ်တော့မှာမို့ ပြောရတာ လို့ ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး ရင်ဖွင့်
အရှက်ကွဲချင်ကွဲပါစေ တစ်နိုင်ငံလုံးသိအောင် ပြောမှဖြစ်တော့မှာမို့ ပြောရတာ လို့ ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး ရင်ဖွင့် ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည် သူတစ်ပါးအိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲတဲ့သူတွေခံစားရမယ့် အရာ(၅)မျိုး လောကမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ အယုတ်ညံ့ဆုံးလုပ်ရပ်တွေထဲမှာသူတစ်ပါးအိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲတာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုလူတွေက ယာယီတော့ ပျော်ရွှင်ရမယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး သူတစ်ပါးမိသားစုကိုဖြိုခွဲတဲ့သူတွေ၊ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေခံစားရမယ့်အရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးလည်း […]
ကနျြးမာရေးအသိပေးမှုမြားကို Drone Speaker မြားဖွငျ့ နှိုးဆျောရနျစီစဉျနဟေု နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျပွော
ကနျြးမာရေးအသိပေးမှုမြားကို Drone Speaker မြားဖွငျ့ နှိုးဆျောရနျစီစဉျနဟေု နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျပွော ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ပတျသကျပွီး ကနျြးမာရေးအသိပေးမှုမြားကို Drone Speaker မြားဖွငျ့ နှိုးဆျောနိုငျရနျ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနှနှငျ့ပူးပေါငျး၍စီစဉျနပွေီဖွဈကွောငျး နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ယနေ့(ဧပွီ ၂၄ ရကျ) တှငျပွုလုပျသညျ့ ခငျြးပွညျနယျမှ ပွညျသူမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲ၌ ပွောကွားခဲ့သညျ။ ကျန်းမာရေးအသိပေးမှုများကို […]